Ekhaya | Ucanzibe 2022
Ndizamile amaSpredishithi aDume kakhulu eAmazon- kunye noPhononongo lwe-56,000 akukho nto iphosakeleyo
Ukuthenga izinto zokulala kunokuba yinto ehlekisayo. Ngaba ukubala ngentambo kubalulekile? Ithetha ntoni i-sateen kunye ne-percale? Ngaba kufuneka ukhethe iflannel okanye ilinen okanye enye into ephefumla ngakumbi? Yonke inokuba yinto encinci. Ke ngokwendalo, iindlebe zam zagcwala xa ndisiva malunga nezona shiti zaziwa kakhulu eAmazon, kunye nokuphononongwa okungaphezulu kwama-56,000. Olu yayileloluhlobo lokhuphiswano endandinokulufumana ngasemva.
Iingcebiso ezili-10 zokuLungiselela igumbi lakho elincinci lokulala
Ikholeji inokuba noxinzelelo (ulwazi olugqithisileyo luyinyani), ke kubalulekile ukuba uzinike isithuba sokuphumla. Nangona amagumbi amancinci akhiwe ngeendonga ze-cinderblock kunye neebhedi zebhedi azenzelwanga ukuzola, banokuziva benoxolo ngakumbi xa yonke into icwangcisiwe. Ukugcina izinto zakho ayikokuphela kokucoceka. Yindlela yokulungiselela ubomi bakho ngokwemiqathango yakho ukuze uhlale ulawula xa i-semester iphambana.
Izipho ezimnandi ezingama-44 zeedola ezili-10 (okanye ngaphantsi!)
Nantsi indlela yokuchitha nje i-10 yeedola kwi-2020 (kwaye ngamanye amaxesha utshintshe!
Ungawukhulisa njani umsila weBurro, i-Succulent ecekeceke kodwa entle
Indlela yokukhulisa kunye nokunyamekela umsila we-burro.
Le Crate yenja ephindwe kabini njengetheyibhile esecaleni iya kudibanisa uyilo lwakho ngobuhle ngokugqibeleleyo
Intsomi isandula ukwazisa uluhlu olutsha lweemveliso zenja ezisebenzayo kwaye ziyilwe kakuhle kubandakanya ikreyiti, ibhedi, isitya, into yokudlala ehlafunwayo, kunye nokusula kwendalo konke.
Ingqokelela yeDisney entsha yePottery Barn Ifaka iMickey-Shaped Bar Cart
Uphefumlelwe nguMickey ka-1928, ukuqokelela kubonisa i-classic shades efana ne-grays, abamnyama kunye nabamhlophe, ngokuqinisekileyo kunye nezinye izinto ezibandakanya iipopu zesiginari ebomvu kunye nezicathulo ezibomvu.
Zifanele Ukuba Ziphezulu Kangakanani Iitafile Zam?
Wamkelekile kuWilsonart Lwesithathu! Siye sasebenza kunye neengcali zasekhitshini eWilsonart ukuphendula imibuzo yabafundi bethu malunga nokulungiswa kwekhitshi. Siza kuthumela iimpendulo kwiWilsonart ngolwe-Lwesithathu lonke ixesha lasehlotyeni, ke ubuze imibuzo apha kwaye ujonge iimpendulo! -Niki R. Umgaqo we-ergonomic-of-thumb kukuba iingqiniba zakho kufuneka zigobe kwi-45-degree i-engile xa izandla zakho ziphumle kwi-countertop.
Izipho ezingama-25 zabathandi beencwadi abazakufuna ukutsiba kanye
Ezi zipho zabathandi beencwadi zibandakanya yonke into evela kwiimfuno ezifanelekileyo zencwadi kunye nezinto zokuhombisa kuba impahla.
Okokugqibela: Iibhalbhu ze-LED ezonga amandla ngokuKhanya okuShushu kweMveli
Izibane zasekhaya ziyavuya. Iibhalbhu zokukhanya ziye zavela ngakumbi kule minyaka mihlanu idlulileyo kunakwinkulungwane-nangaphezulu ukusukela oko kwaqala ukwenziwa kwe-incandescents. Ii-LEDs ziguqula ukukhanya kwamakhaya ngokunikezela ngokusebenza ngakumbi kwamandla kunee-CFL ezidityaniswe nokukhanya okufudumeleyo kwezibane zemveli. Sisebenzisene novulindlela we-Cree® we-LED ukukuzisa ngokukhawuleza kwiibhalbhu ezintsha ze-LED kunye neendlela ezilungileyo zokuzisebenzisa.
Izinto ezi-5 zePatio ezinesitayile esijolise ekuphakamiseni indawo yakho yangaphandle, ukuqala kwi- $ 15
Ivenkile yeCandelo lePatio kunye neGadi yeThagethi yokuhonjiswa kwepatio ngexabiso elifikelelekayo ukuphakamisa indawo yakho yangaphandle.
I-IKEA ngoku ithengisa inguqulelo encinci ye-Teeny yeBlue Blue Bag yayo
Kukho ibhegi entsha encinci kwindawo yesehlakalo, ngaphandle kwenye i-IKEA.
Uyikhulisa njani eyakho iMoss
umfanekiso: 4408655c3cedc308834ed860d17d3f831de27960 w: 540 s: 'fit' class_name: 'mt-image-center' show_pin_button: 'true' show_image_credits: 'true' Ndiyazithanda izithuba zangaphandle ezizaliswe ziintyatyambo ezigqithileyo, iimfumba zeembiza ezingafaniyo, iibits kunye neebobs , kunye neengubo ezibhalwe ngobutyebi be-moss. Nangona ubulembu bunokunxulunyaniswa namagama athi 'hlazekile' okanye 'umgxobhozo', sisityalo esisempilweni kakhulu kuba asinazo izinambuzane eziyingozi okanye izifo.
Le bhegi Stylish ngokufihlakeleyo ineBhasikiti yePikniki epheleleyo kwaye ipholile
Enkosi ngale bhaka yepikniki, uya kuhlala ukulungele ukonwabela ukutya ngaphandle nanini na, naphi na.
Le bhedi yosuku e-Pink Velvet ineMfihlo: Ikwayibhedi yokuThonta
Ukuba uyayithanda imbono yokuba nesofa yevelvet kodwa ungenayo itoni yesithuba, ngoku ungangena kumbulelo omnandi kule pink velvet daybed and trundle bed.
Ndingayinamathisela i-Laminate kwiLaminate?
Wamkelekile kuWilsonart Lwesithathu! Siye sasebenza kunye neengcali zasekhitshini eWilsonart ukuphendula imibuzo yabafundi bethu malunga nokulungiswa kwekhitshi. Siza kuthumela iimpendulo kwiWilsonart ngolwe-Lwesithathu lonke ixesha lasehlotyeni, ke buza imibuzo yakho apha kwaye ubuye ungene kwiimpendulo! - UMargaret MA: Asikukhuthazi ukugcoba ngaphezulu kwe-laminate- kodwa ungayenza ukuba ukulungele ukubeka igrisi engqinibeni kuyo.
Ungayikhulisa njani i-Lemon Button Fern, i-Hardy Fern oyifunayo
Indlela yokukhulisa kunye nokunyamekela iqhosha le-lemon.
USherwin-Williams: Fumana ipeyinti ekulula ukuyicoca!
Xa ulungiselela ukupenda igumbi lomntwana wakho, imibuzo embalwa ihlala ifika engqondweni: ngowuphi umbala omele uwukhethe? Ngaba iphantsi okanye ayikho i-VOC? Uza kufuna malini? Kodwa awunakuhlala ucinga ukuba kulula kangakanani ukucoca? Amagumbi abantwana yindawo yemisebenzi! Ukuhamba, ukudlala, ukutsiba, ukuwa, ukuchitheka… ngekhe uyazi ukuba kuya kwenzeka ntoni. USherwin-Williams uyakwazi oku.
IAmazon Ithengisa Ifenitshala yePatio yaBantwana, kwaye ayithandeki ngokungathandekiyo
Le fenitshala yangaphandle enesitayile yabantwana intle kakhulu, uya nqwenela ukuba ize ngobukhulu babantu abadala.
Le Pig Ottoman Ihambe Intsholongwane kuTwitter, kwaye Iso Oinking Cute
I-ottoman, evela kwingqokelela yasekhaya kaChristopher Knight, ayisiyiyo nefanitshala yokuqala yehagu ukunyukela kudumo ngexesha lokutshixwa.
Ukwazisa: Isinxibo esimnyama esincinci
Hayi indlela yokunxiba encinci ecace gca eyomeleleyo.
intsingiselo yokubona i-111
Intsingiselo ye-12: 12